‘संसद् विघटन खारेज गर’ को मास्क लगाएर महरा सडकमा
प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा सडक आन्दोलनमा देखिएका छन् । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको विरोध सभामा पूर्व सभामुख महराले ललितपुरको जुलुसको नेतृत्व गरेका थिए । महराले ‘प्रतिगामी कदम मुर्दावाद, संसद विघटन खारेज गर !’ लेखिएको मास्क लगाएका थिए । संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिलामाथि दुव्र्यवहारको आरोप लागेर सभामुखबाट राजीनामा गरेपछि महरा लामो समय निस्क्रिय थिए । ललितपुरको जुलुसको नेतृत्व स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल र रघुजी पन्त लग...
प्रधानमन्त्रीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनमा, देलान् राजीनामा ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ। सरकार परिवर्तन गर्न दलहरूबीच सहमति जुट्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको प्रतिनिधिसभाको अंकगणित बदल्न मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने संकेत गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले आइतबार संसद् सचिवालयमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको चिठी दर्ता गर्ने संकेत पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको संकेत गरेका हुन्। यसैक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार आफूलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिए राजीनामा दिने बताएका छन्। ‘राजीनामा त माग्यामाग्यै...
Lokaantar 19 दिन पहिले
एमाले नेतृत्वकै सरकार पाँच वर्ष :पण्डित
नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य, सांसद तथा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि नै नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार रहने दाबी गरेका छन् ।मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले अब एमालेको नेतृत्वले पार्टीलाई एक बनाउने र सरकारलाई सफल बनाउनेबाहेक अन्य क्रियाकलापहरु नगर्ने पनि दाबी गरे । उनले […]
प्रतिनिधिसभा बैठक १० मिनेटको लागि स्थगित
काठमाडौं : सभामुख अग्नी सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक १० मिनेटलाई स्थगित गरेका छन्। विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोधमा रोष्टम घेराउ गरेर विरोध गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। यसअघि प्रचण्ड नेपाल समूहले उक्त बैठक बहिस्कार गरेका थिए।
प्रचण्ड माधव समूहद्वारा प्रतिनिधिसभाबाट 'वाकआउट'
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा बैठक प्रचण्ड माधव समूहले बहिस्कार गरेका छन्। सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यादेशहरु पेश गर्ने भएपछि उक्त समूहले बैठक बहिस्कार गरेका हुन्। उक्त समूहबाट बोल्दै भीम रावलले आफैले हत्या गरेको प्रतिनिधिसभामा सरकार आफैले प्रस्ताव ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।त्यसपछि सभामुख अग्नी सापकोटाले प्रस्तावलाई अघि बढाउने बताएपछि…
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा प्रतिनिधिसभाका ९२ जना सांसद पुग्ने जिकिर गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले अबको प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हुने दावी गरे । पूर्वमन्त्री बस्नेतले पार्टी एक हुने स्थिति नदेखिएकाले जतिसक्दो चाँडो पार्टी फुटाएर भएका आफ्ना सांसदहरु जोगाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूहलाई सुझाव दिए ।
संसद् विघटन ऐतिहासिक अपराध हो : पौडेल
धरान- नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघठन ऐतिहासिक अपराध रहेको बताउँदै सडकमा संविधान फालिएको एवं मतको धोका भएको बताएका छन् ।पूर्व सभामुख समेत रहेका पौडेलले ७० औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुक्रबार धरान उपमहानगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्र कमजोर हुन नदिन संसद् प्रणाली बच्नुपर्ने बताए । संसद् विघटन ऐतिहासिक अपराध भएको उनको […]
कानूनविद्हरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कदमबारे फरक–फरक राय प्रस्तुत गरेका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे पनि कुनै पनि हालतमा चुनाव नहुने स्पष्ट पारे […]
माइतीघरमा विवेकशील साझाको प्रदर्शन, 'न्यायालय अब तिम्रै आस छ'
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा विवेकशील साझा पार्टीले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। माइतीघरमा भेला भएका विवेकशीलका सदस्यहरुले 'असंवैधानिक संसद विघटन' खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरुले सडकमा विरुवा राखेर लोकतन्त्रको विरुवा मार्न नपाइने भन्दै प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनका उत्रेका युवाहरुले अब जनताको आशा न्यायालयको मात्रै रहेको नारा…
विवेकशील ऐना सहित प्रदर्शनमा: यो समय भ्याक्सिनको हो प्रम ज्यू, 'कू' मतिमा नलाग्नुस् !
२२ पुस, काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनु पर्ने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहद्वारा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरपार्टी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मिश्रले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुस गरेको संसद विघटन संविधानसम्मत् नभएकाले […]